सावधान ! बाग्लुङ र स्याङ्जामा चट्याङका कारण २ जनाको मृत्यु, हावाहुरी र वर्षा हुने – live 60media
काठमाडौं । शुक्रवार विहानै देखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसँगै परेको चट्याङ परेको छ । चट्याङका कारण दुईजनाको मृत्यु भएको छ । बिहिबार राति परेको चट्याङका कारण एकजना घाइते भएका छन् । ठूलो वर्षा नभएका कारण तुँवालेले छोपेको काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ । केही स्थानमा विहान देखि हावाहुरी र वर्षा समेत सुरु भएको छ ।
बाग्लुङ र स्याङ्जामा चट्याङका कारण २ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइेत भएकी छन् । बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ सिले बस्ने ४५ वर्षीय खिमलाल कँडेलको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, स्याङ्जाको फेदीखोला–५ बायाँ फड्के बस्ने ३९ वर्षीय ईश्वरी लामिछानेको पनि मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता (एसएसपी) मोहन पोखरेलले बताए । बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका–३ रातमाटा घर भएकी ४५ वर्षीय कृष्ण कुमारी कार्की घाइते भएकी छिन् । उनको अवस्था सामान्य छ ।
गोठमा भैंसी दुहुन जाँदै गर्दा चट्याङले खिमलालको मृत्यु भएको हो । चट्याङको झड्का लागेर घाइते भएकी ईश्वरीको गण्डकी अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ । चट्याङ लागेर पर्वतको जलजला–८ लुप्राङमा १ भैसी, १ गोरु र दुईवटा बाख्रा म रे का छन् ।
हाल देशमा स्थानीय वायु र पश्चिमी न्युन चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ। देशको पहाडी भू(भागमा आंशिक देखि सामान्य बादल र बाँकी भू९भागमा आंशिक बादल रहेको अवस्था छ । शुक्रबार प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू(भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू९भागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू९भागहरुका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
आइतबार देशको पहाडी भू९भागमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू९भागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भू९भागका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विहीबार राति भीषण हावाहरी चलेको छ । राति करिव ९ बजेपछि हावाहुरी चलेको हो ।
← आयो खुसिको खबर : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य !
चर्चित बाल गा’यक सचिन परि’यारकि जन्म’दिने आमा मिडिया’मा, वास्त’विक यस्तो रहेको खु’लासा (हेर्नुस् भि’डियो) →